सकारात्मक कुरा भएको छ, संशोधन भएन भने चुनावमा जाने कुरै आउँदैन - Dainik Nepal
सकारात्मक कुरा भएको छ, संशोधन भएन भने चुनावमा जाने कुरै आउँदैन
दैनिक नेपाल २०७४ असार २८ गते १९:०८
बृषेशचन्द्र लाल, वरिष्ठ नेता, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
संविधान संशोधनको विषयले अहिले जोडतोडले स्थान पाइरहेको छ । एमालेले संशोधनको कडा रुपमा बिरोध गर्दै आइरहेको छ । एमाले र राजपा नेपालबीच देखिएको तिक्तता पनि केही मत्थर भएका समाचार आइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा संविधान संशोधन र एमालेसँगको सम्बन्धका विषयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका प्रभावशाली नेता बृषेशचन्द्र लालसँग हाम्रा सहकर्मी विमल योगीले गर्नुभएको कुराकानी :
संविधान संशोधनका विषयमा कुरा मिल्यो ?
राजपा नेपाल आन्दोलनमा छ । आफ्नो मुद्दाहरू, मधेसका एजेन्डालाई स्पष्टताका साथ प्रस्तुत गरिसकेको छ । आन्दोलनका साथसाथै हामी सम्वादलाई पनि कहिल्यै छाडेका छैनौँ । हामी जहिले पनि सम्वादमा छौँ । यो नै प्रमाणको कुरा हो कि हामी जुन संघर्षमा छौं त्यो संघर्षको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौँ । त्यसका लागि संविधान सबैका निम्ति स्वीकार्य बनोस् भन्ने चाहन्छौँ ।
अहिले पनि सम्वाद जारी छ । मंगलबार मात्रै हाम्रा नेताहरू र सत्तापक्षका नेताहरूबीच कुराकानी भएको छ । उहाँहरूले संविधान संशोधन गर्ने त्यसका निम्ति प्रयास जारी छ भन्नु भएको छ । राप्रपासँग पनि कुराकानी भएको छ । सत्तापक्षले प्रमुख विपक्ष दलसँग पनि कुराकानी गर्दै छौँ भन्नु भएको छ । फेरि पनि छलफल गर्ने भनेका छन् । राम्रो वातावरणमा कुरा अगाडि बढेको छ ।
हामीलाई आशा र विश्वास पनि दिलाइएको छ । परिणाम त बाहिर आएको छैन । तर, मंगलबार बालुवाटारमा भएको कुराकानीलाई हामीले सकारात्मक नै मान्छौँ । हामीले चाहेको पनि त्यही हो । विपक्षीसहित सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग कुरा गरेर मधेसको न्यायोचित एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानको संशोधन हुनुपर्छ ।
संशोधन विधेयक फेल भयो भने तपाईहरूले के गर्नु हुन्छ ?
संविधान तब नै स्वीकार्य हुन सक्छ, जब यसमा मधेसका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिन्छ । हामीले उठाएका न्यायपूर्ण कुराहरूलाई संशोधन गरेर सम्बोधन हुनुपर्छ । मधेसी, थारु, आदिवासी, जनजाति, दलित सबैको निमित्त संशोधन हुनुपर्छ । त्यसकारणले यो संविधान संशोधन भएन वा संशोधनमा आएन भने तथा न्यायोचित कुराहरूलाई संशोधन गरेर राख्न सकिएन भने संविधान त कहिल्यै पनि स्वीकार्य बन्न सक्दैन । हाम्रो आफ्नो अडान यथावत रहन्छ ।
संशोधन फेल भयो भने निर्वाचनमा जानु हुन्छ कि ? जानु हुँदैन ?
निर्वाचनमा जाने वा नजाने सर्तमा यो संशोधन प्रस्ताव हामीले अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदै हुँदैन । निर्वाचनमा जाने कुरा र पछिको स्थिति हेरेर त्यसमा हामीले छलफल गरेर, विचार विमर्श गरेर जनतासँग पनि हामीले अन्तरक्रिया गरेर त्यसबारेमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । तर, कस्तो परिस्थिति विकसित गर्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ ।
एउटा कुरा के छ भने जब कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेले यो संविधान जारी गरेदेखि यसमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै आएका हुन् । तर, अहिले एमालेले संशोधन नगर्ने र निर्वाचनपछि गर्छौं भन्ने जिद्दी गर्नु चाहिँ स्वभाविक होइन । यो राष्ट्रिय समस्यालाई समाधान गर्ने दिशातिर जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार हुनु पर्‍यो । त्यो चाहिँ भएन । हामी चाहन्छौँ यसको समाधान होस् ।
एमालेसँग राजपा नेपालको निकटता बढेको हो ?
हाम्रो दूरी नै छैन । एमालेसँग हाम्रो के को दूरी ? के को दुश्मनी ? दुश्मनी नै छैन हाम्रो । हामीले त संविधान संशोधन गरौँ भनेका छौँ । उहाँहरूले संविधान संशोधन गर्न अहिलेसम्म बाधा खडा गरिराख्नु भएको छ । यो कुरा राजनीतिक रुपमा प्रतिस्पर्धा हो । राजनीतिक रुपमा समर्थन र विरोधको कुरा हो । तर, चाहिँ एमाले हाम्रो दुश्मन होइन । हामी पनि यही देशको एउटा राजनीतिक पार्टी हौँ ।
एमाले पनि जिम्मेवार पार्टी हो । प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । त्यसकारणले त्यस्तो राजनीतिक रुपमा हाम्रो कहिल्यै पनि दूरी छैन । एमालेका नेताहरूसँग हाम्रो भेटघाट पहिलो पनि हुन्थ्यो । र अहिले पनि भइरहेको छ । त्यो परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।
संशोधन विधेयक पारित भएन भने सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत रहन्छ कि रहँदैन ?
सरकार अहिले पनि गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैन । शहीद घोषणा हुन बाँकी छ । किस्ताकिस्तामा शहीद घोषणा गरेको छ । घाइतेहरू ओछ्यानमा छन् । हाम्रा कार्यकर्तामाथि मुद्दाहरू चलाइएका छन् । मर्ने पनि आन्दोलनकारी हुन् । घाइते हुने पनि आन्दोलनकारी हुन् । आन्दोलनकारीलाई मुद्दा पनि चलाइएको छ । हामीले यी सब कुराहरू सहमतिअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । मुद्दाहरू फिर्ता लिनु पर्छ भनेका छौँ ।
चुनाव सकिएपछि संशोधन गरौँ भनेर प्रस्ताव आयो भने के गर्नु हुन्छ ?
निर्वाचन र संविधान संशोधनको कुरा फरक हो । अहिले दुर्भाग्यबस निर्वाचन र संविधान संशोधन दुबैलाई गाभेर कुराहरू भइरहेको छ । जबसम्म यो संविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म संविधान हाम्रो निमित्त स्वीकार्य नै छैन भने यो संविधान अन्तरगत हुने निर्वाचनमा हामी कसरी जाने ? हामीले त्यसको विरोध गर्नै पर्छ । हाम्रो राजनीतिक दायित्व हुन जान्छ मधेसको एजेन्डालाई कायम राख्दै संघर्षलाई अगाडि बढाउँदै जाने दायित्वको रुपमा रहन्छ । त्यसका कारण यस्तो सर्त राख्नुमा नै कतै न कतै बेइमानीको गन्ध आउँछ ।